Ngabe i-iOS 10 ingafakwa kuma-iPhone 4s noma ku-iPhone 5? | Izindaba ze-IPhone
U-Ignacio Sala | | iOS 10, iPhone 4S
Amatheminali abelokhu emakethe isikhathi eside kunazo zonke ngokuvamile yilawo kungekudala noma nini basala ngaphandle kokuxhaswa yinkampani. Kepha konke kuya ngomkhiqizi. Wonke umuntu uyazi ukusekelwa okwesabekayo okuhlinzekwa yibo bonke abakhiqizi be-Android kumadivayisi abo, ukusekelwa okuphela kwesinye isikhathi ngemuva konyaka wokuqala wokuphila kwesiguli.
Ngenhlanhla amadivayisi akhiqizwe yi-Apple, zisekelwa yi-Apple iminyaka embalwa, kuze kube ngumzuzu lapho izindaba nezidingo ezidingekayo ukuze umsebenzi ube uketshezi, ziphoqa inkampani ukuthi ibakhiphe emakethe, ibashiye bengekho ukuxhaswa.
I-iOS 7 bekunguqulo yokugcina ehambisana nomakadebona we-iPhone 4, ukuphela ngaleso sikhathi yayisetshenziswa kabanzi emazweni amaningi, ikakhulukazi emazweni asafufusa. Ukusebenza okujwayelekile kwale nguqulo ye-iOS bekungaqondakali, okuholele ekutheni sicabange ukuthi inguqulo yesishiyagalombili ye-iOS ngeke ihambisane nalesi siginali. Enkulumweni eyethulwe i-iOS 8, u-Apple ukuqinisekisile ukuthi i-iPhone 4 ayisekelwa futhi kuzofanele aphile zonke izinsuku nge-iOS 7.
Emasontweni ambalwa ngaphambi kokukhishwa kwe-iOS 9, amahemuhemu aphinde aqala ukusakazeka mayelana nokuthi kungenzeka lokho le nguqulo ye-iOS ibingasebenzisani ne-iPhone 4s, kusukela ezinhlotsheni zokuqala ze-iOS 8, i-terminal ibisibe yi-paperweight yangempela, njenge-iPad 2 ne-iPad Mini. Ngenhlanhla, ukubuyekezwa okwethulwa yinkampani kuthuthukise kakhulu ukusebenza kwenguqulo yesishiyagalombili ye-iOS.
Ukufika kwe-iOS 9, lapho ngokusho kwe-Apple bebegxile ekwenzeni ngcono ukusebenza nokusebenza kuma-terminals akudala kakhulu, kube ukukhululeka kubo bonke abasebenzisi be-iPhone 4s ne-iPad 2, ngoba ukusebenza kwakucishe kufane ngokwamanzi nokusetshenziswa kwawo, kunezinguqulo zakamuva ze-iOS 8.4.2, kepha konke kwabonakala kukhombisa ukuthi kuzoba uhlobo lokugcina lwe-iOS abazoluthola.
Lapho nje ukwethulwa kwazo zonke izindaba ze-iOS 10 sekuphela, inkampani esekwe eCupertino ikhombise uhlu lwawo wonke amatheminali angahambisana nenguqulo yeshumi ye-iOS 10 lapho singabona khona ukuthi i-iPhone 4s, i-iPad Mini, i-iPad 2 ne-3 kanye ne-5th generation iPod touch zishiywe ngaphandle komjikelezo wokuvuselela. Kepha emahoreni ambalwa kamuva, lapho i-Apple ithumela zonke izindaba nge-iOS 10 kuwebhusayithi yayo (inguqulo yaseMelika), sibona ukuthi inkampani ibiwafake kanjani amatheminali abelahliwe embhalweni ongukhiye.
Abathuthukisi babe ngabokuqala ukumemezela ukuthi ukufakwa kuhlu kuboniswa kuwebhusayithi Akuhambisananga negama eliyisihluthulelo ngemuva kokubheka ukuthi amatheminali amadala angavumeli kanjani ukufaka i-beta yokuqala ye-iOS 10. I-Apple iguqule ngokushesha uhlu lwamatheminali ahambisanayo ngokususa amatheminali engishilo ngenhla ku-equation. Ngakho-ke ama-iPhone 4 ekugcineni azosekelwa futhi ngeke athole i-iOS 10. Lokhu akusho ukuthi uma kutholakala iphutha elikhulu kwezokuphepha, i-Apple ngeke ikhiphe isibuyekezo ukuze ilungiswe, kodwa izoyeka ukuthola izinhlobo ezintsha zezinhlelo zokusebenza inkampani izokwethula ngokuzayo, kufaka phakathi i-iOS 10.
I-iPhone 5 ngokwengxenye yayo, ukuphela okudala okudala ohlwini ngesikhathi emakethe, kodwa ngehadiwe efanayo ne-iPhone 5c eyaphuma ngonyaka olandelayo, kuzoqhubeka nokuthola izinhlelo ezintsha zokusebenza okungenani iminyaka embalwa, umjikelezo owalandelwa yinkampani uyaqhubeka, ushiya amatheminali angomakadebona ngaphandle kokuxhaswa njalo eminyakeni emibili. Ikakhulu idivaysi yami yokuhlola ama-betas iyi-iPhone 5, futhi kufanele ngivume ukuthi ukusebenza kwe-beta yokuqala kuketshezi kakhulu uma kuqhathaniswa nama-betas okuqala ayethulwe yinkampani ye-iOS 9, okuphakamisa ukuthi inkampani empeleni usebenze ekuthuthukiseni ukusebenza nokushelela kumatheminali amadala, yize iqiniso lokuthi izinto ezintsha eziningi ezizovela esandleni se-iOS 10 ngeke zitholakale ngenxa yemikhawulo enengqondo yehardware yakudala.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iOS » iOS 10 » Ngabe i-iOS 10 ingafakwa kuma-iPhone 4s? Futhi ku-iPhone 5?
Sawubona, ngifisa sengathi bengingazama futhi ngisebenzise indlela yokufaka iMacOS Sierra ku-Mac Pro 2008
Sawubona Henry. Angikaze ngiyizame ngoba bengingayidingi (ngizoyenza ngoSepthemba), ngakho-ke anginasiqiniseko sokuthi izosebenza. Kepha kukhona ithuluzi elibizwa nge-UniBeast (lapha elokugcina http://www.tonymacx86.com/resources/unibeast-6-2-0.314/ ) esivumela ukuthi sifake iMac kunoma iyiphi ikhompyutha (ngikwenze eLenovo, kepha angizwanga ngathi ngiqala ukuhlola ukucushwa ngingedwa). Umqondo ukwenza i- "Hackintosh" usebenzisa iMac yangempela.
Njengoba angizange ngiyivivinye, anginasiqiniseko sokuthi uzodinga iMac engalanda i-MacOS Sierra, kepha okuzodinga umuntu ozokwabelana nawe ngefayela lokufaka le-MacOS Sierra ukuze wakhe i-USB eBootable ne-Unibeast. Uma unenhlanhla, uzokwazi ukufaka uhlelo olusha ku-Mac yakho futhi, njengoba iyi-Mac yangempela, izinto ezifana ne-Wi-Fi zizoqhubeka zikusebenzele.
Sawubona nginombuzo ngine-iphone 5c mr ungincoma ukufaka i-beta? Yilokho, ngizwile ukuthi ibhethri alihlali
Ngiyayihlola ku-iPhone 5 futhi impilo yebhethri iyafana. Abanye abantu basho okwehlukile, kepha konke kuya ngokuthi isikhathi esingakanani awusayisanga kabusha ifoni kusuka ekuqaleni, ngoba ungaba nezinhlelo zokusebenza eziningi ezisalayo ezithinta impilo yebhethri.
UDavid E Martinez kusho
Uma ngikwazi ukulanda i-chrome kufoni yami 4s ingitshela ukuthi ngidinga ukuyivuselela ibe ngu-os 10.0
Phendula uDavid E Martínez
IOS 5 Phakade kusho
Uffff lapho i-iphone 4s igcinwe khona !!!
Phendula ku-IOS 5 Phakade
sawubona ungathuthukisa kuma-4s.
ingabe ikhona indlela yokuvuselela i-iphone 4s
Angazi ngokubuyekeza, anginciki ocingweni, ngisebenzisa okubalulekile futhi ama-iPhone 4 ahle kakhulu, inalokho okudingayo.
Ngikufisela inhlanhla, ngathenga i-iPhone 4S, bengingakaze ngibe nohlobo oluthile lwedivayisi ye-mac, umbuzo wami uthi lokho kuthinta kanjani izibuyekezo ze-IOS? Ngisho, i-4S ayisasebenzi kuma-social network nsuku zonke nakho konke lokho?
Uma amadoda futhi esebenza ngokushesha ngizothola i-flextore futhi ngilande yonke into mahhala.
vic sayini kusho
Manje usungabuyekeza kusuka ku-iphone 4s kuye ku-ios 9.3 kuphela naku-iphone 5 ios10.1, kubalulekile ukushiya isikhala esikhululekile ngoba sine-8gb kuphela, kuzofanele ususe izinhlelo zokusebenza bese uzivuselela ngokuhamba kwesikhathi ngesikhala sokulayisha izinhlelo zokusebenza usebenzisa kakhulu
Phendula ku-vic sainz
Ngilifaka kanjani i-iOS 10 ku-iPhone 4s xq yami angikwazi ukulanda uhlelo lwe-chrome
Uhlobo lwesibili lweCarPlay iOS lufika kumadivayisi ahambisanayo
I-Xiaomi Bluetooth Speaker Somlomo, isipikha esincane futhi esinamandla esiyohlala sihamba nawe njalo